वयस्कहरूको लागि विषयहरू सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: वयस्क विषयवस्तुहरू
महिलाहरु को लागी गुदा सेक्स - के तपाइँ जान्न र बुझ्न आवश्यक छ
अब धेरै र अधिक लोकप्रिय आराम र सेक्स मा विविधता। तर, त्यहाँ सिक्का "दुई पक्ष" छन्। केटीहरु जो गुदा सेक्स अभ्यास जान्न आवश्यक छ ?!
कुन उत्पादहरू एक अंतरंग मिति अघि खारेज गर्नुपर्छ
प्रकाशित 01.12.2018 01.12.2018
जसरी तपाईं मानिसको पेटमा आफ्नो पेटको माध्यम बाट काम गर्नुहुन्छ, यसलाई बढि नलिनुहोस्। त्यहाँ खाद्य पदार्थहरू छन् कि एक घनिष्ट मिति बर्बाद गर्न सक्छन्। ध्वनी बडबड र पेटमा कोलिक, ग्यास गठन, पेट दुख्ने - जस्तै ...
महिलाहरूको यौन जीवनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ?
महिला उमेर को रूप मा, आफ्नो सेक्स ड्राइव छिटो कम गर्न सक्दछ। कामेच्छा र रमाईलो घट्नु दुई मुख्य गुनासोहरू हुन्। हर्मोनमा परिवर्तनहरूका लागि यी परिवर्तनहरूलाई समय भन्दा पहिले लेख्नु पर्दैन, यो विशेष मूल्या special्कन गर्न लायकको छ ...
गुदा सेक्स। थ्योरी, प्रशिक्षण र अभ्यास
के तपाईं गुदा सेक्स कोशिस गर्न चाहानुहुन्छ, तर एकै साथ तपाईको मांसपेशिहरु घबराइरहेका छन? निम्नलिखित सुझावहरूले तपाईंलाई ग्रीक प्रेम सुरू गर्न र मजा लिन मद्दत गर्दछ। थ्योरी त्यहाँ गुदा क्षेत्र मा धेरै नसाहरू छन्, र तिनीहरूको उत्तेजना ...
के यो महिला हुनु गाह्रो छ?
के यो महिला हुन गाह्रो छ? एक प्रश्नको साथ प्रश्नको उत्तर को लागी मलाई माफ गर्नुहोस्, तर ... के यो सबै बाच्न गाह्रो छ? महिला जन्मेका हुन्छन्, बनेका छैनन्। त्यहाँ अवश्य पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जुन आफ्नो लि gender्ग मनपर्दैन ...
समलि h्गी एक रोग वा विकृति हो? के समलिose्गीलाई निको पार्न सकिन्छ?
समलि h्गी एक रोग वा विकृति हो? के समलिose्गीलाई निको पार्न सकिन्छ? धेरै चाखलाग्दो र गाह्रो प्रश्न, यसको उत्तर कम गाह्रो छैन। किन? किनकि यस घटनालाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्दछ ...
के यो सत्य हो कि सेना सैनिकहरूमा थपिएका थिए र ब्रोमिनलाई चिनियाँ थपियो? वा यो एक मिथक हो?
के यो सत्य हो कि सेनामा चियामा ब्रोमिन थपियो र थपियो? वा यो मिथक हो? सोभियत समयमा, तिनीहरूले थपे। तथ्य यो छ कि हामी उहाँबाट शान्त थियौं, मैले ध्यान दिएन। खैर यो यही हो कि १ 18-२० सम्म ब्रोमिनको खपत हुनुपर्दछ ...
एक सानो यौन अंगको साथ, कन्डोम कुनै पनि आवश्यकता छैन?
सानो जननांग अंग संग कन्डम बेकार छ? एउटा सानो लि with्ग भएको मानिस बाँझो हुँदैन र सजिलै बुबा बन्न सक्छ! यदि जीवनको यस चरणमा पितृत्वको योजना छैन भने, ...
छोटो केटाकेटीका बालबालिकाहरु संग पुरुषहरु जस्तै पुरुषहरु?
मूल हास्यास्पद पत्रहरू कसरी पठाउने?
कसरी मूल तीन हास्यास्पद पत्रहरू पठाउने? आंशिक रूपमा यसको लागि म मेरो उपनाम मन पराउँछु र BV मा मात्र यसलाई प्रयोग गर्दिन। मलाई लाग्छ कि मैले सिद्धान्तमा धेरै विकसित ...
कुन क्षणमा तपाइँ गैर-धूम्रपान गर्ने धुम्रपान गर्न चाहनुहुन्छ?
धूम्रपान नगर्नेले कहिले धूम्रपान गर्न चाहन्छ? मैले मेरो जीवनमा एक पटक धूम्रपान गरें जब म गम्भीर दुर्घटनामा परेको थिएँ। मसंग रुने बल थिएन, जब म पछाडिबाट बदलेको कारलाई हेर्दा म छक्क परें। चुपचाप ...
वसन्तमा हार्मोन किन खेल्छन्?
वसन्तमा हर्मोनहरू किन खेल्छन्? किनभने लामो हाइबरनेसन पछि, सबै प्रकृति अन्तमा जीवन, पात, फूल, कलियों खिलिन्छ। यो बाहिर न्यानो हुँदैछ। सबै प्रकृति नयाँ जीवनको सुरूवात भएको देखिन्छ। म चाहन्छु…
इवान कलिताको इतिहासमा के थाहा छ?
इवान कलिता इतिहासमा केको लागि परिचित छ? यो तथ्य हो कि उनले महान शासनकालका लागि होर्डे खानबाट लेबल प्राप्त गरे, त्यस्तै खानले मस्को रियासतका लागि अनुमोदन गरिसकेपछि। संक्षेप मा, एक श्रद्धांजलि ...
पिसिङ के हो?
पिसि is भनेको के हो? त्यहाँ मानिसहरू छन् जो पेशाबद्वारा खोलेका छन्, वा केटीहरू जसले आफ्नो पेशाब खाली गर्छन्। तिनीहरूले यो कसैलाई गर्न सक्छन्, वा मात्र लेख्न सक्छन्, र pissing प्रेमी यो बाट प्राप्त हुनेछ ...
तपाईंको लागि "RIGHT PERSON" को हो?
अखबार + पछाडि = आत्म-रक्षा अनुचित साधनहरू? के कसैले कोसिस गर्यो?
समाचार पत्र + पुडल = ईम्प्रोभ्वाइज्ड साधनहरूको साथ आत्मरक्षा? के कोहीले यो प्रयास गरेको छ? राम्रोसँग पैदा भयो, रूबल सिक्का लिनुहोस्, तपाईंको पामको स्तम्भ बनाउनुहोस्, सम्पूर्ण चीज मेडिकल चिपकने प्लास्टरले लपेट्नुहोस् - जब यो वस्तु ...
किन मिसनरीहरू प्रायजसो महिलाहरू गर्छन्?
किन धेरै महिलाहरूमा मिसनरी स्थिति लोकप्रिय छ? महिलाको यौन जीवनको विभिन्न अवधाहरूमा उनीहरू विभिन्न कारणका लागि मिसनरी स्थिति मन पराउँछन्। यौन गतिविधि को शुरुआत मा - यो मुद्रा को कम से कम संयम पैदा गर्दछ, ...
मेरो प्रेमिका किन सेक्सको डरलाग्दो छ?
मेरी प्रेमिका किन यौनसंग डराएको छ? मलाई लाग्छ कि यो मात्र होइन कि उहाँसँग धेरै राम्रो र अप्रिय अनुभव थियो, र सायद उनी पहिलो पटक शान्त थिइन्। त्यसैले यो हुन सक्छ ...
69 मुद्रा को सार के हो?
सम्मोहन संभोगको समयमा सधैं क्षतिग्रस्त छैन?
के सम्भोगको दौरान हाइमेन सधैं क्षतिग्रस्त हुँदैन? हो, यो हुन्छ। यो असामान्य कुरा हो जब केही केटीहरूले केही समयको लागि यौन सम्पर्क राखे, तर हाइमेनको अखण्डतालाई उल्लंघन गरिएको थिएन।
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 48 अर्को पाना
56 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,304 प्रश्नहरू।